Ny fanamby ataon'ny mpitantana haran-dranomasina dia tsy mamaritra fotsiny ny paikady hampiharina amin'ny toe-javatra iray manokana, fa ny fanombanana na ny fandrefesana ny fahombiazan'ireny paikady ireny ary ny fampifanarahana azy ireo raha toa ka tsy tratra ny vokatra tadiavina. Mahaiza mitadidy ary Adaptive Management dia fototry ny fandrindrana sy ny fitantanana mahomby. Ny fandrefesana ny fahombiazan'ny hetsika fiarovana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy ny fanombanana dia afaka manome fototra ho an'ny lesona hianarana, famaritana paikady ho avy, sy ny fampandrosoana ny programa. Ohatra, raha te hanatratra ny harafesin'ny haran-dranomasina, ny tompon'andraikitra eo an-toerana dia tsy maintsy mamaritra ny halehiben'ny asa ataon'izy ireo ary afaka mamantatra ny antony mahomby sasantsasany rehefa tsy misy ny hafa. Ny fahombiazan'ny fandrefesana dia hanampy amin'ny famantatra ny tombontsoa avy amin'ny fandaharan'asa iray na ny paikady sy ny fiantraikany amin'ny tanjona, ary hanamafisana raha misy ny paikady mahavaha ny fiantraikany. Ny vokatra azo dia mety hanampy:
Jereo ireo tabilao etsy ambany raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fanaraha-maso sy ny fanombanana mba hanohanana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ny fiarovana. Ny loharanom-baovao mahatalanjona ho an'ny fahatakarana sy fanombanana ny fahatakarana an-tserasera dia ny fandaharam-potoana an-tseraseran'ny The Nature Conservancy: Fomba atao. Ity fizarana ity dia manome fampahalalana momba ny fomba hanaovana fanombanana ny fanaraha-maso ny fandaniana, hampivoarana ny tanjona mazava, sy hamaritra ny famantarana, ary hanara-maso ny endriky ny endrika.
Fandaharam-pandresena azo jerena amin'ny Internet